Madax weyne Musdafe Muxumed, oo gaadhay Qabri-dahare. - Hargeele - Wararka Somali State
Madax weyne Musdafe Muxumed, oo gaadhay Qabri-dahare.
November 2, 2019 125
Wafdi balladhan oo uu hogaaminayo madaxweynaha DDS, musdafe Muxumad Cumar, oo gaadhay magaalada Qabridahare ee caasimada gobolka Qoraxey, ayaa hada uga sii ambobaxay dhanka magaalada Shilaabo.Wafdigan ayay u jeedadiisu tahay in uu uguurgalo degmooyinka iyo deegaanada ay saameeyeen fadahaadaha wabiga Shabeele ee sida, Feer-Feer, Qallaafo, iyo Mustaxiil, wafdigan ayaa lagu wada inuu maalmaha soo socda ku sugnaan doono deegaanadaas.
Soomaaliya iyo Qadar oo ka wada hadlay Iskaashiga Isgaarsiinta & Tiknolojiyadda
Soomaaliya iyo Qadar oo kala saxiixday heshiis ku saabsan Iskaashiga Isgaarsiinta & Tiknolojiyadda+sawirro
Kal fadhigii golaha xildhibaanada degmada Awbare oo furmay.
Madax ku xigeenka DDS oo booqasho ku tagey degmada Qabri bayax.
Koomishinka Xaquuqul insaanka itoobiya oo sheegay inay Xukuumada DDS shaqo wanaagsan ka qabatay ilaalinta Xaquuqda Aadamaha.